‘पार्टीलाई सुढृढ र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षमता अबको नेतृत्वमा देखिनुपर्छ’
फरकधार / २३ भदौ, २०७८
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस राैतहटका सभापति कृष्णप्रसाद यादवलाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्योल नै अन्योलका बीच सुरु भएको छ । यो महाधिवेशन हाम्रा लागि महापर्वको रुपमा रहेको छ । यसको नेतृत्व कसको हातमा पर्ला ? कार्यसमितिमा तलदेखि माथिसम्म कस्तो नेतृत्व रहने भन्ने चर्चा यतिबेला आमसमुदायले गर्न थालेका छन् । देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने, क्षमताका साथ अघि बढाउन सक्ने नेतृत्वबारे छलफल हुनु आवश्यक छ । संस्था र पार्टीलाई सुदृढ बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने क्षमताका नेता अब पार्टीले पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
युवालाई कांग्रेसमात्र होइन प्रत्येक पार्टीले समावेशी ढंगमा सहभागी गराउनु पर्छ । हाम्रो पार्टीमा झनै बढी यसको बहस चल्ने गरेको छ । नेपाली कांग्रेसमा युवाहरुको अत्यावश्यक भूमिका छ । युवाहरुले विगतमा पनि पार्टीमा योगदान दिएका छन् । अब नेपाली कांग्रेसका युवाहरु नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यी र यस्ता सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै युवाले कांग्रेस पार्टी हाँक्न सक्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसमा बेलाबखत परिवारवाद हाबी भएको कुरा पनि उठ्छ, तर अहिले यो समस्या मैले देख्दिँन । पार्टीमा गरेको त्याग र क्षमताका आधारमा सबैले स्थान पाउनु पर्छ । हाम्रो पार्टीमा अधिकांश नेता आफ्नो क्षमताकै कारण अघि बढेको देख्छु । कहिलेकाहीँ एउटा ठूलो पार्टीमा यस्ता कुरा बहसमा आउनु अन्यथा होइन । अलिअलि परिवारवाद थियो पहिला कांग्रेसमा, अब त्यो छैन । यो समस्या बारम्बार दोहोरिनु पनि हुँदैन । यो महाधिवेशनमा परिवारवाद हाबी हुनै सक्दैन, सबैको आफ्नो क्षमता र व्यक्तित्व हेरेर यो महाधिवेशनले नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ ।
हिजो प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस विभिन्न बाध्यताका बीच अहिले सत्तामा पुगेको छ । अहिले कांग्रेसको काँधमा डबल जिम्मेवारी रहेको छ । देशलाई कसरी अघि बढाउने र पार्टी कसरी सुदृढ गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले राम्ररी सोचेर अघि बढ्नुपर्ने बेला हो यो । अहिले कोरोनादेखि बाढी–पहिरो जस्ता विपत्तिबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । गठबन्धनको पूर्ण विश्वासका साथ नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी दिएको छ । एउटा जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले देशमा विद्यमान समस्या हलसहित, विकास निर्माणका काम गर्दै जोशका साथ अघि बढ्नुपर्छ । देशलाई नै कांग्रेसले डोर्याउने आशा–अपेक्षा जनताले गरेका छन् । कांग्रेसले त्यो काम सबै गरेर जनतालाई विश्वासमा लिने अवसर पाएको छ । अब त्यसमा खरो उत्रनु पर्छ ।
हामीबीच भएका सबै चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ । यतिबेला मूल नेतृत्व सबैभन्दा बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । देशकाल, परिस्थिति अहिले त्यति अनुकूल पनि छैन । कोभिडका कारण हामीमात्र नभई विश्व नै पछाडि परेको छ । नेपाली जनतालाई तीन महिनाभित्र पर्याप्त खोप उपलब्ध गराउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । स्थानीय चुनावदेखि नै जनतालाई विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यो महाधिवेशनपछि प्रत्येक वडादेखि नै नेपाली कांग्रेस के हो ? कांग्रेसमा हामी किन लाग्यौं ? कांग्रेसको भूमिका के हो ? नेपाली कांग्रेसले देशलाई के गर्छ ? देशलाई र जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने ? जनतालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । वडादेखि नै कांग्रेसका साथीहरुलाई प्रशिक्षणको रुपमा तालिमको आवश्यक छ । नेतृत्वले यसबारे गम्भीर भएर सोच्ने छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।
‘विधानमा क्रियाशील सदस्यता प्रमुख अंग भनेपछि मनपरी गर्न मिल्दैन’– सल्यान सभापति
प्रकाशित मिति : भदौ २३, २०७८ बुधबार १२:५:४, अन्तिम अपडेट : भदौ २३, २०७८ बुधबार १२:७:२८